Fa maninona ny dokotera no mampiasa merkiora ary ny marary mampiasa mpanara-maso ny tosidra?
Fanaraha-maso ny fanerena tosidra
Digital fitsapana hafanana
Infrared sofina fitsapana hafanana
Thermometre mialoha ny infrared
Betsaka ny namana manontany amin'ny dokotera, maninona ny dokotera ao amin'ny hopitaly no tia mampiasa sphygmomanometer elektronika, fa manome baiko ny marary hody amin'ny sphygmomanometer elektronika?
Raha ny marina dia ity ny tsy fahazoantsika azy, tsy misy lalàna toy izany, ny sphygmomanometer elektronika ankehitriny sy ny mercury sphygmomanometer dia eo amin'ny sehatra iraisana, ny dokotera no tokony hampiasaina, raha hampiasa mercury sphygmomanometer, dia afaka mampiasa sphygmomanometer merkiora koa.
Amin'ny taona 2020, ho tratra ny fikarakarana ara-pahasalamana maimaim-poana, ary hiala amin'ny hopitaly tsimoramora ny sphygmomanometer. Dingana vonjimaika fotsiny izao. Noho izany, any amin'ny hopitaly, hitantsika indraindray ny fampiasana sphygmomanometer mercury, indraindray mampiasa sphygmomanometer elektronika。
Betsaka ny namana amin'ny fisian'ny tosidra elektronika, tsy azo ihodivirana izany, satria ny tsindry amin'ny tsindry amin'ny tsena dia misy ny olana sasany, matetika ny fandrefesana dia tsy marina, mamitaka, hitondra savorovoro be amin'ny rehetra, noho izany, maro ny olona tsy mino amin'ny fanaraha-maso ny tosidra elektronika.
Raha ny marina dia marina ny mpanara-maso ny tosidran'ny rà elektronika ampiasain'ny fianakavianay.
Ny mpanara-maso ny tosidra elektronika dia samy manana ny tombony ananany:
1. Tsy misy merkiora, mampihena ny fahavoazana.
2, fandidiana tsotra, mora ianarana, afaka miasa ihany koa ny olona iray.
3. Asan'ny firaketana ny tosidra sy ny asan'ny tombana amin'ny tahan'ny fo.
4, ny sandany dia marimarina kokoa, raha ampitahaina amin'ny sphygmomanometer mercury ho tsara.
5. Ny sphygmomanometer elektronika dia Mampiasa ny fomba oscillographic, izay mandrefy ny tosi-dra amin'ny fandrefesana ny fihoaran'ny rà mandriaka amin'ny rindrin'ny lalan-drà.
Ahoana ny fampiasana marina ny fanaraha-maso ny tosidra elektronika?
1. Rehefa tsy maika handrefy ianao dia makà fialan-tsasatra mandritra ny 15 minitra. Rehefa mandre ny tosi-drà dia mipetraha amin'ny seza izay miverina ao aoriana amin'ny toerana milamina sy mahazo aina, mihalefaka ny natiora amin'ny vatana iray manontolo.
2. Esory ny tanany ambony, apetaho amin'ny sandriny ambony ny kitapo rivotra, ary ny marika dia tokony hokendrena amin'ny lalan-drà brachial; ny sisiny ambany amin'ny kitapo dia tokony ho 2 ~ 3cm ambonin'ny elbow.
3. Ny sandry ambony dia tokony hitovy haavo amin'ny fo. Mafana hatrany mba tsy hihozongozona amin'ny ririnina.
4. Mandritra ny dingan'ny fandrefesana tsindry mandeha ho azy, ny marary dia tsy afaka mihetsika, raha tsy izany dia tsy hahomby ny fandrefesana noho ny onja diso vokatry ny fihetsiky ny hozatra.
5. Ny elanelam-potoana misy eo amin'ireo refy roa dia tokony mihoatra ny 3 minitra, ary ny toerana sy ny toerana dia tokony hifanaraka araka izay tratra.
Miankina amin'ny azy manokana ny fanaraha-maso ny tosidra, mpanampy tsara kokoa ny metatra elektronika!
Misaotra anao inquriy, hamaly anao izahay ao anatin'ny 24 ora!
Company: Hangzhou Sejoy Electronics &. Fitaovana Co., Ltd
Address: No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, 311100, Hangzhou, Sina